May 2016 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Android Tool Lock/Unlock Networking Tool Phone Application
Maung Pauk at 11:46:00 PM 0
Huawei H30 C00 တွေ imei null ဖြစ်ချင်း၊ CDMA 800Mhz မဖတ်ချင်းများအတွက်ပါ..
USB Debugging သိရင် bat ဖိုင်လေးကို Run ပေးလိုက်ရုံပါပဲ..
Credit : Myo Ko Ko Zaw
Huawei H30 C00 Network Unlock.zip: 19.19 Mb
Ko Lin at 9:39:00 PM 0
Ko Lin at 9:36:00 PM 0
Maung Pauk at 5:26:00 PM 0
Huawei Board Firmware တင်ဖို့ Huawei Smart phone Multi-download Software 1.0.0.2
Maung Pauk at 5:02:00 PM 0
Huawei Board Firmware တင်ဖို့ Huawei Smart phone Multi-download Software လိုပါတယ်.. အလွယ်တကူရှာမရနိုင်သူတွေအတွက် အလွယ်တကူရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
MMC Storage Mode 9006 ကို QPST Software မသုံးပဲ One Click ဖြင့် ၀င်နည်း
Huawei_Qualcomm_Platform_Bootloader-Fastboot_Multi-Download-1.0.0.2.rar : 37.4 Mb
Rar Password = www.maungpauk.org
အရိပ်, စတုရန်းနဲ့ စက်ဝိုင်း ပုံစံတွေနဲ့ထားနိုင်တဲ့ အမိုက်စား - Vion - Icon Pack v3.8 Apk
Win Hlaing at 4:37:00 PM 0
Android နှင့် Tablet အသုံးပြုနေကြတဲ့ ဘော်ဒါတို့အတွက် ခပ်မိုက်မိုက် ကဗျာတွေ စာတွေ ဖွဲ့သီကုံးနိုင်လောက်သော Icon Pack လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Launcher ပုံစံတွေများများစားစား အတွက် ပြည်စုံလောက်တဲ့ Icon Pack ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေး၏ အဓိက အချက်တော့ အရိပ်ပုံစံ, စတုရန်းပုံစံ, စက်ဝိုင်းပုံစံ 3D ရုပ်ထွက်ပုံစံ အစရှိသော် (117) ပုံစံများစွာပါရှိတဲ့ Android Application Icon pack လေးဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုမယ်သူများအတွက် Android OS 4.1 အထက်ရှိဖုန်းများအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 42.MB ဖြစ်ပါတယ်။ ဘော်ဒါတို့အတွက် အောက်မှာ screenshot ရိုက်ပေးထားပါတယ်။
Junkware Removal Tool ( JRT ) v8.0.6
Maung Pauk at 1:39:00 PM 0
Windows Computer သမားတွေရဲ့ Browser ကိုဖွင့်လိုက်ရင် ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ Ask Toolbar, Babylon, Blekko, Claro / iSearch, Conduit, Crossrider, DealPly, Delta, Facemoods / Funmoods, Findgala, Globasearch, Hao123, iLivid, Iminent, IncrediBar, MocaFlix, MyPC Backup, MyWebSearch, PerformerSoft, Privitize, Qvo6, Searchqu, Snap Do, Swag Bucks, Wajam, Web Assistant, WhiteSmoke, Zugo စတဲ့ Toolbar တွေ၊ မလိုချင်တဲ့ Add-ons တွေ အလိုအလျောက် ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ JRT လေးကို Run ပြီး Key တစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်.. Junkware တွေ ရောက်လာပြီဆိုရင် ကိုနှိပ်ချင်တာကို ချက်ချက်မသွားဘဲ ကြော်ငြာလင့်တွေ၊ မလိုချင်တဲ့လင့်တွေကို ရောက်ရာက်သွားတာ ကြုံဖူးကြမှာပါ.. အဲဒီလို ဘာလို့ရောက်လာတာလဲဆိုတော့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေက Pop up Script တွေရှိနေတဲ့ လင့်တစ်ခုခုကိုနှိပ်မိပြီး ပေါ်လာတဲ့ Ads တွေကိုနှိပ်မိတာ၊ Free ရတဲ့ Software တွေကိုထည့်မိရင်း အဲဒီ Software တွေက အလိုအလျောက် ကိုယ့်စက်ထဲကို Toolbar တွေ၊ Add-on တွေထည့်သွားတာတွေကြောင့်ပါ. အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားလို့ရပါတယ်.. http://www.maungpauk.org/2014/03/layer-click-ads-website-blog.html မှာ 2014 ကတည်းက ကျွန်တော် ရေးထားခဲ့ပြီးသားပါ..
အခုတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားလို့ Junkware တွေရောက်နေရင် အောက်က JRT လေးကို Run ပြီး ကီးတစ်ခုခုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. ပြီးရင် ကွန်ပျူတာကို Restart ချပြီး စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ သုံးနိုင်ပါပြီ.. နောက်ထပ် Junkware တွေ မဝင်စေချင်ရင်တော့ http://www.maungpauk.org/2014/03/layer-click-ads-website-blog.html မှာကြည့်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်.. မလိုအပ်ဘဲ ဆော့ဝဲတွေကို ဒေါင်းပြီး Install မလုပ်ကြဖို့လည်း သတိပေးလိုပါတယ်..
Windows Computer သမားတှရေဲ့ Browser ကိုဖှငျ့လိုကျရငျ ကိုယျမလိုခငျြတဲ့ Ask Toolbar, Babylon, Blekko, Claro / iSearch, Conduit, Crossrider, DealPly, Delta, Facemoods / Funmoods, Findgala, Globasearch, Hao123, iLivid, Iminent, IncrediBar, MocaFlix, MyPC Backup, MyWebSearch, PerformerSoft, Privitize, Qvo6, Searchqu, Snap Do, Swag Bucks, Wajam, Web Assistant, WhiteSmoke, Zugo စတဲ့ Toolbar တှေ၊ မလိုခငျြတဲ့ Add-ons တှေ အလိုအလြောကျ ရောကျနပွေီဆိုရငျတော့ JRT လေးကို Run ပွီး Key တဈခုခုကိုနှိပျလိုကျရုံနဲ့ အဆငျပွပေါတယျ.. Junkware တှေ ရောကျလာပွီဆိုရငျ ကိုနှိပျခငျြတာကို ခကျြခကျြမသှားဘဲ ကွျောငွာလငျ့တှေ၊ မလိုခငျြတဲ့လငျ့တှကေို ရောကျရာကျသှားတာ ကွုံဖူးကွမှာပါ.. အဲဒီလို ဘာလို့ရောကျလာတာလဲဆိုတော့ အဓိကအကွောငျးအရငျးတှကေ Pop up Script တှရှေိနတေဲ့ လငျ့တဈခုခုကိုနှိပျမိပွီး ပျေါလာတဲ့ Ads တှကေိုနှိပျမိတာ၊ Free ရတဲ့ Software တှကေိုထညျ့မိရငျး အဲဒီ Software တှကေ အလိုအလြောကျ ကိုယျ့စကျထဲကို Toolbar တှေ၊ Add-on တှထေညျ့သှားတာတှကွေောငျ့ပါ. အဲဒီလိုမဖွဈအောငျ ကွိုတငျကာကှယျထားလို့ရပါတယျ.. http://www.maungpauk.org/2014/03/layer-click-ads-website-blog.html မှာ 2014 ကတညျးက ကြှနျတျော ရေးထားခဲ့ပွီးသားပါ..
အခုတော့ ကွိုတငျပွငျဆငျမထားလို့ Junkware တှရေောကျနရေငျ အောကျက JRT လေးကို Run ပွီး ကီးတဈခုခုနှိပျပေးလိုကျပါ.. ပွီးရငျ ကှနျပြူတာကို Restart ခပြွီး စိတျခမျြးခမျြးသာသာနဲ့ သုံးနိုငျပါပွီ.. နောကျထပျ Junkware တှေ မဝငျစခေငျြရငျတော့ http://www.maungpauk.org/2014/03/layer-click-ads-website-blog.html မှာကွညျ့ပွီး ကွိုတငျကာကှယျထားနိုငျပါတယျ.. မလိုအပျဘဲ ဆော့ဝဲတှကေို ဒေါငျးပွီး Install မလုပျကွဖို့လညျး သတိပေးလိုပါတယျ..
Junkware Removal Tool is simple to use yet has powerful features. The application also hasavery lightweight footprint at approximately 1.53MB
Junkware Removal Tool ( JRT ) v8.0.6.exe : 1.53 Mb
Thiha Htike at 12:35:00 PM 0
Than Toe Aung at 8:15:00 AM 0
Maung Pauk at 2:53:00 PM 0
Maung Pauk at 12:28:00 PM 0
Samsung Frp 2016 Remover Tool စမ်းသပ်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. Myanmar XDA Forum က ယူလာတာပါ..
Samsung Frp 2016 Remover Tool.exe : 2.2 Mb
Phone Application နည်းလမ်းများ
Qualcommm SmartPhone Backup & Restore လုပ်နည်း (အပိုင်း - ၂)
ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမှာ ကတော့ Qualcomm CPU သုံး ဖုန်းတွေကို Firmware Backup ယူနည်း နဲ့ Firmware ပြန်တင်နည်းတွေကိုပြောပြပေးမှာပါ
dload File Firmware နဲ့ MMC Storage Backup Firmware နဲ့ဘာတွေကွာလဲ
dload Firmware တင်တဲ့အခါ စိတ်ကြိုက်ရွေးတင်ခွင့်မရှိပါဘူး ဥပမာ Virus ကိုက်နေတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ Flashtool Firmware တွေဆိုရင် System File တစ်ဖိုင်ထဲ ရိုက်ထဲလို့ရပါတယ် dload File firmware မှာ အဲလိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး အကုန်တင်ပေးသွားတာပါ ပြီးရင် Build Number မြင့်နေတာကို Build Number အနိမ့်နဲ့တင်လို့မရပါဘူး Step2Fail, Write Data Error Fail အစရှိတဲ့ Error တွေတက်ပါတယ် MMC Storage Backup Firmware မှာ Error တစ်ခုမှမရှိပါတယ် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် Logo Error, Deadboot Error, Boot load Error အကုန်ရှင်းနိုင်ပါတယ် အဆင်ပြေတာကတော့ ရှိသမျှQualcomm ဖုန်းတွေအားလုံးကို Backup ယူထားတာအကောင်းဆုံးပဲ နောက်ပိုင်းမှာဘာ Error ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေအောင်ပါ
Backup ယူမယ့်ဖုန်းက Qualcomm ဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုစစ်မလဲ
အောက်ဆုံးနားလေးက Hardware နေရာမှာ Qualcomm 8x1x ဆိုရင် သေချာပါတယ် Qualcomm Device ပါပဲ MTK DroidTool အခြား Tool တွေ နဲ့လဲကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်
MMC Storage 9006 Firmware Backup ထုတ်နည်း
၁။ ဖုန်းမှာ Root Access ရှိရပါမယ် BusyBox.apk သွင်းထားရပါမယ် Root ဖောက်နိုင်ဖို့အတွက် King Root Version အမြင့်ထည့်ပေးထားပါတယ်
၂။ ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Zip ကိုဖြည်ပါ password တောင်းရင် www.sithumobile.com လို့ရိုက်ပါ
၃။ Android EMMC Folder ကိုဖွင့်ပါ Android eMMC.exe ကို Run ပါ
၄။ Software ပွင့်လာရင် ညာဖက်ထောင့်နားလေးက Check phone ဆိုတာလေးကို နိုပ်ပါ
Scanning for devices ...
Android device found.
Android serial number : ?
ROOT STATUS : Phone are rooted you are ready to go.
Checking tools ...
SU VERSION : 3.61:kinguser_su
BUSYBOX VERSION : 1.23.1-Stericson
ဒါမျိုးလေးပေါ်လာရင် Backup စတင် ရိုက်လို့ရပါပြီ
၅။ Option menu မှာ Block Mode ကိုအမှန်ခြစ်ပါ ပေါ်နားက Block menu လေးက မှိန်နေရာကနေ လင်းလာတာလေးတွေ့ရပါလိမ်မည်
၆။ Action menu မှာ ကို Save ချင်တဲ့နေရာ ရွေးပါ
mmkcblk0 ကစပြီး mmkcblk1p1 ထိတစ်ဖိုင်ခြင်းရိုက်ထုတ်ပါ
တစ်ခြားBackup ထုတ်နည်းတွေလဲအများကြီးရှိပါသေးတယ် နောက်မှတင်ပေးပါအုန်းမည် လောလောဆယ် အလွယ်ဆုံးနည်းကိုအရင်တင်ပေးထားတာပါ
MMC Storage 9006 Firmware Restore လုပ်နည်း
၁။ EMMCRAW.exe ကိုဖွင့်ပါ အပိုင်း ၁ မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ ဖုန်းကို MMC Storage ၀င်နေတဲ့အနေအထားမှာ ကြိုးထိုးပါ Drive menu မှာ Refresh ကိုနိုပ်ပါ
Description = Disk drive
MediaType = External hard disk media
Model = Qualcomm MMC Storage USB Device
Size = 3909091328 Bytes
ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေရင်တော့ Restore လုပ်နိုင်ပါပြီ
၂။ Write menu မှ browser ကိုနိုပ်ပြီး မိမိ backup ထုတ်ထားသော နေရာမှ mmkcblk0 ကိုခေါ်ပေးလိုက်ပါ
၃။ Load Partition Structure ကိုနိုပ်ပါ ဖိုင်မှားခေါ်ရင်တော့ Error တက်ပါလိမ့်မည် ဖိုင်အမှန်ခေါ်ရင်တော့ ဘေးမှာ Partition အခန်းတွေကြလာပါလိမ့်မည်
၄။ Write Select Partition ကိုနိုပ်ပြီး Firmware တင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ
အပိုင်း (၃) မှာတော့ BoardFirmware ရေးမိလို့ ဖြစ်သော Error များ IMEI0Error, Boot Logo Error, Noti Error, Theme Error, Fastboot3color Error, SIM ONE Error အစရှိသော Error တွေအကြောင်းတင်ပေးပါအုန်းမည် ..
Credit : အောင်သူရ @ စည်သူကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း
အပိုင်း (၁) ကိုပြန်ဖတ်ချင်ရင် >>> LINK
Computer software Photo Editor Portable
ဓာတ်ပုံတွေကို ကာတွန်းပြောင်းတဲ့ Image Cartoonizer Premium 1.4.2 Portable For PC
Maung Pauk at 12:13:00 PM 1
ဒီ Software ကတော့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကာတွန်းပုံလေးဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ Windows PC သုံး Software လေးဖြစ်ပါတယ်.. Cartoon effects, Color effects, Instagram effects စတဲ့ Effect ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်သဘောကျတဲ့ စိတ်ကြိုက် Effect တွေကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်.. Portable ဖြစ်လို့ Install လုပ်စရာမလိုဘဲ တိုက်ရိုက်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. Windows 32 bit မှာရော 64 bit မှာပါ သုံးနိုင်မှာပါ...
ဒီ Software ကတော့ ဓာတျပုံတှကေို ကာတှနျးပုံလေးဖွဈအောငျ ပွောငျးလဲပေးနိုငျတဲ့ Windows PC သုံး Software လေးဖွဈပါတယျ.. Cartoon effects, Color effects, Instagram effects စတဲ့ Effect ပေါငျး ၂၅၀ ကြျောပါဝငျတာကွောငျ့ ကိုယျသဘောကတြဲ့ စိတျကွိုကျ Effect တှကေို ဖနျတီးနိုငျပါတယျ.. Portable ဖွဈလို့ Install လုပျစရာမလိုဘဲ တိုကျရိုကျသုံးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ.. Windows 32 bit မှာရော 64 bit မှာပါ သုံးနိုငျမှာပါ...
Image Cartoonizer Premium portable isasimple photo to cartoon tool for converting your best photos to cartoons. The application is designed with some tools and techniques that you might want while you are converting picture into cartoons. The application not only cartoonize your snaps but also add some amazing effects to your cartoon images like face morphing. You can also add goodies like headphone,glass,monocle,mustache,beard,horn,rims....even smilly faces! No other software is going to provide these!
Image Cartoonizer Premium 1.4.2 Portable.rar : 65 Mb
Error Solution Files Phone Application SYH
SYH WP930 ဖုန်းလေး Display Error တက်နေရင် သုံးဖို့ ဖိုင်သေးသေးလေးပါ.. New World Mobile က ကိုထက်အာကာတင်ပေးထားတာတွေ့လို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
SYH WP930 Display Error Fix.zip : 9.87 Mb
Maung Pauk at 11:45:00 AM 0
Code Mobile Codes Phone Application Samsung နည်းလမ်းများ
Samsung Korea အလုံးတွေမှာ Network Mode ပြောင်းလို့မရဖြစ်နေရင် ဖြေရှင်းနည်း တစ်ခု
Maung Pauk at 11:10:00 AM 1
Samsung Korea အလုံးတွေမှာ Network Mode ပြောင်းမရလို့ မြန်မာ SIM တွေ သုံးမရဖြစ်နေတဲ့အခါ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. အားအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ အာမမခံနိုင်ပါ..
လုပ်နည်းကတော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Model အလိုက် ဂဏန်းတွေကို ဖုန်းခေါ်သလို ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
[ Samsung Korea အလုံးတှမှော Network Mode ပွောငျးမရလို့ မွနျမာ SIM တှေ သုံးမရဖွဈနတေဲ့အခါ ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတဈခု ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ.. အားအဆငျပွမေယျလို့တော့ အာမမခံနိုငျပါ..
လုပျနညျးကတော့ အောကျမှာပေးထားတဲ့ Model အလိုကျ ဂဏနျးတှကေို ဖုနျးချေါသလို ချေါရမှာဖွဈပါတယျ.. ]
ဒါဆိုရင် Password ထည့်ဖို့ Box လေးတစ်ခု ကျလာပါမယ်.. အဲဒီ Box လေးမှာ နောက်က ပေးထားတဲ့ Password ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ..
[ဒါဆိုရငျ Password ထညျ့ဖို့ Box လေးတဈခု ကလြာပါမယျ.. အဲဒီ Box လေးမှာ နောကျက ပေးထားတဲ့ Password ကိုထညျ့ပေးလိုကျပါ.. ]
SKT Hidden Menu ဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီထဲက Network Setting ထဲကို ဝင်ပြီး .
[SKT Hidden Menu ဆိုတာပျေါလာမှာဖွဈပါတယျ.. အဲဒီထဲက Network Setting ထဲကို ဝငျပွီး ]
Network Mode ကိုနှိပ်ကာ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Network ကိုရွေးပေးနိုင်ပါပြီ...
[Network Mode ကိုနှိပျကာ ကိုယျ့နိုငျငံနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ Network ကိုရှေးပေးနိုငျပါပွီ...]
K model go to dialpad type 319712358 > Password = 774632 > Network Setting > (change whatever you want).
S model go to dialpad type 319712358 >Password = 996412 > Network Setting > (change whatever you want).
L model go to dialpad type 319712358 > Password = 0821 > Network Setting > (change whatever you want).
Internet Download Manager 6.25 Build 19 Full
Maung Pauk at 10:47:00 AM 0
မနေ့က (မေလ ၂၄ )Windows PC သမားတွေအတွက် Internet Download Manager 6.25 Build 19 Full ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
IDM Setup : 6.53 Mb
Than Toe Aung at 7:16:00 AM 0
Android Application Android Games
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုနှစ်သက်သူတွေအတွက် Game [81 MB] [apk]
Than Toe Aung at 7:13:00 AM 0
Than Toe Aung at 6:54:00 AM 1
Samsung S6 EDGE အချို့မှာ CROM (OEM) Lock ဖြစ်နေလို့ Custom Recovery သွင်းမရရင် ဖြေရှင်းနည်း
Samsung S6 edge တချို့အလုံးတွေမှာ crom က lock ဖြစ်နေပါတယ် setting ထဲ က oem unlock enable လုပ်ထားလဲ custom recovery change လို့မရပါဘူး
crom ကို unlock လုပ်ပေးရပါမယ် crom lock / unlock ကို odin mode ဝင်ပီးကြည့်နိုင်ပါတယ်
crom unlock လုပ်ဖို့ crom service apk လေးနဲ့ unlock လုပ်ပီးရင် ချိန်းလို့ရပါပီ (သိတာလေးမျှဝေချင်းသာ)
Credit : မင်းထက်နိုင်
S6 CROM Unlock.apk : 1.32 Mb
Code Mobile Codes နည်းလမ်းများ
Error Code Collection For SP Flashtools
Maung Pauk at 5:30:00 PM 1
Credit: Kurama Uchiha